My Dear Diary » မဲဆွယ်ခြင်း မဟုတ်	18
kai says: NLD နိုင်ပြီ…။
မြစပဲရိုး says: We have to dream before our dreams can come true. :-))
naywoon ni says: မဲဆွယ်​ခြင်း မဟုတ်​ဆိုကတည်းက မဲဆွယ်​​နေတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အဘနီ
ကထူးဆန်း says: မဲ ဆွယ် ခြင်း မဟုတ် ပါဘူး .. တိုက် တွ န်း တာ ပါ ..းး
အရီးလတ် စကား နားထောင် သော အားဖြင့် အရီးလတ် အလို အတိုင်း မျက်စိစုံမှိတ် မဲ ထည့် ရန် အလို ငှါ့ ယနေ့ ည ရန်ကုန် ပြန်ပါမည်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: ကထူးဆန်း။ Respect you … Adore you …. စကားနားထောင်လို့ တကယ်ကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :-)))
မြစပဲရိုး says: အခုပေးနေတဲ့ မဲ အများစု မှာ မျှော်လင့်ခြင်း၊ တရားမျှတမှုလိုလားခြင် တွေ၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်း တွေ အများကြီးပါတယ်။
အဲလို အောက်လမ်းနည်းတွေသုံးပြီး နိုင် ရင် တိုင်းပြည် မှာ ပိုပြီး မယုံကြည် မှု သံသယ တွေ နဲ့ အေးချမ်းဖို့ လမ်းမမြင်တာ ကို အဆင်အခြင် နဲ လွန်းကြရင်လဲ …… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: စစ်တပ်အင်အား ၄သိန်းလောက်မှာ.. မိသားစုပါထည့်တွက်ရင်… မဲပေးနိုင်တာ.. ၁သန်းလောက်ထွက်တယ်..။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ခေးးဒေဂို ချော့ ပေါင်းးးဂျ…!!!
ဇီဇီခင်ဇော် says: Credit Htet Cho
မြစပဲရိုး says: ပခဖ ကို ဝိုင်းရံသူတွေ ကို လဲ စမ်းစစ်ကြည့်ကြပါဦးတော့။ :-))
Mike says: .အခု NLD တကယ်နိုင် သွားပြီ
kai says: မဲဆွယ်ပွဲ…မဲရွေးပွဲတွေမှာ.. ဒီဆယ်စုနှစ်ပိုင်းထဲ.. မမှားဖူးသေးဘူး..။
အဲဒီကရက်ဒစ်ကို.. ရွာသားကကျောက်ကိုပေးလိုက်ပါသဗျ..။ ဆိုတော့…။
မြစပဲရိုး says: သူကြီး အရင်တုန်းက တစ်ညွန့်ညွန့် လုပ်နေခဲ့တာကိုများ။
အဲဒီလို ညွန့် ရအောင် မနိုင်တဲ့ ကြားက အတင်းလုပ်နေတုန်း။ ကျွန်မ ကတော့ မကောင်း တာ ကို ရှေ့ထားထားပြီး ကြည့်နေမိတာဘဲ။
kai says: နိုင်ငံရေးပေါ့..။
မြစပဲရိုး says: ၄၉% မထားခဲ့မိတာ နာ တာဘဲ လို့ အချင်းချင်း အပြစ်တင်နေချင် နေကြမှာ။
kai says: ၁၅% အထိလျှော့ပါဦးမယ်..။
Alinsett @ Maung Thura says: .မေမေ နိုင်ပြီ… မေမေနိုင်ပြီ…